Maxaa ku soo kordhay Dagaalka ka socda Magaalada Guriceel ee Bartamaha Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ku soo kordhay Dagaalka ka socda Magaalada Guriceel ee Bartamaha...
Guriceel (Halqaran.com) – Magaaladda Guriceel ee gobolka Galgaduud, waxaa maalinkii 2aad oo xiriir ah ka socdo dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidammada dowladd Soomaaliya oo kaashanaya kuwa maamulka Galmudug iyo xooggaga Ahlusunna .
Dagaalka oo ay ku dhinteen ku dhaawaad 60 ruux oo iskugu jira saraakiil iyo ciidan ayaa hada ka socda agagaarka xarunta Jaamacadda oo ay saldhig xooggan ka samaysteen Ciidanka Ahlusunna.
Sido kale wararka ka imaanaya magaalada Guriceel ayaa waxaa ay sheegayaan in ciidamadda dowladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta maamulka Galmudug ay gacanta ku dhigeen saraakiil ka tirsan xoogaga Ahlu Sunna ee dagaalka ka wada Guriceel.
Ilo wareedyo lagu kalsoon-yahay ayaa innoo sheegay in sedex ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ciidanka Ahlu sunna la qabtay, iyaga oo dhaawac ah.
Sida laga soo xigtay dadka deegaanka, labada dhinac ayaa isku adeegsanaya hubka daran-dooriga u dhaca, hoobiyeyaal, gantaalaha garabka laga tuuro iyo qoryaha lidka diyaaradaha ee lagu rakibay gaadiidka iyada oo gantaalaha qaarkood ay ku dheceen isbitaalka ugu wayn Guriceel ee Istarliin.